एकल इन्जिनका विमान सञ्चालनमा राेक लगाउने निर्णय गर्यो तर किन भएन कार्यान्वयन ? – Puleso
एकल इन्जिनका विमान सञ्चालनमा राेक लगाउने निर्णय गर्यो तर किन भएन कार्यान्वयन ?
सरकारले केही वर्षअघि नै एकल इन्जिनका विमान सञ्चालनमा राेक लगाउने निर्णय गरेकाे थियाे तर हालसम्म उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपले कार्यान्वन भएकाे पाइन्न ।
बुधबार एउटा मात्र इन्जिन भएको मकालु एयरको हवाई जहाज हुम्लाकाे सिमिकोट नजिकै दुर्घटनामा परेपछि एक इन्जिनका विमानबारे पुनः प्रश्न उठेकाे छ । त्यस्ता विमानको खरीद रोक्ने तथा भएका विमानको उडान बन्द गर्न सकिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बिकट पहाडी भूबनौट भएका क्षेत्रमा उड्दा एकल इन्जिन भएका विमानमा प्राविधिक गडबडी भएमा आपतकालीन अवतरण जोखिमपूर्ण हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तीन वर्ष अगाडी काष्ठमण्डप एयरको जहाज दुर्घटनामा परेपछि सरकारले एउटा मात्र इञ्जिन भएको जहाजमा यात्रु ओसार्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर विमान सेवा कम्पनीहरुले त्यस्तो प्रतिबन्धविरुद्ध मुद्दा हालेपछि एउटा इञ्जिन भएको जहाजलाई मालसामान ढुवानी अर्थात कार्गो र भाडामा लिएर यात्रु बोक्नका लागि मात्र स्वीकृती दिएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक भेषराज सुवेदीले एउटा इञ्जिन भएको जहाज किन्न र उडाउन निरुत्साहित् गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए। उनले भने, “एकल इन्जिन भएका जहाजलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो नीति हो। भएका जहाजहरूलाई पनि कसरी हटाउने वा बन्द नै गर्ने सोच बनाइरहेका छौं।”
पहाडी नेपालमा खासगरी दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा कार्गो र ‘चार्टड’ गरेर यात्रु ओसार्ने काम हाल एउटा इञ्जिन भएको जहाजले गर्दै आएको छ। समथर मैदानमा इञ्जिन फेल भएपनि सुरक्षित अवतरण गर्न सकिने अवस्था विरलै उपलब्ध हुने प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल बताउछन्।
तर, वरिष्ठ क्याप्टेन वाइके भट्टराई समस्या एकल इञ्जिन भएको जहाजमा नभएको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, “निजी अपरेटरहरुले सुरक्षाको नाममा भने अलिकति सम्झौता नै गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा दुर्घटना हुने हो। एकल इञ्जिन कहिले पनि समस्या हुँदैन। त्यस्तो जहाज विश्वभर उडेकै छन्।”
नेपालमा मकालु एयरको एउटा इञ्जिन भएका तीनवटा सेस्ना नामक जहाजले सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए। तर, बुधबार एउटा जहाज दुर्घटनामा परेपछि एकल इन्जिनका जहाजको संख्या अब दुई वटामा झरेको बताइएको छ। (बिबिसी)